Xog : Wax ka Ogoow 5-ta Kun ee Dhalinyaradda ah ee ay Shaqaalaysiisay Dowladda Somalia. – Hornafrik Media Network
Xog : Wax ka Ogoow 5-ta Kun ee Dhalinyaradda ah ee ay Shaqaalaysiisay Dowladda Somalia.
By HornAfrik	 Last updated Nov 28, 2017
Dowladda Somalia ayaa fagaarayaal dhowr ah ka s heegtay inay Shaqooyin u abuurtay 5 Kun oo Shaqaale Dhalinyaro ah, taasoo ah Waxqabadka 1-aad ee ay ku faanto Dowladda Somalia.
Haddaba Ogoow Shaqaalahaas, ?
HornAfrik waxay waqti galisay inay wax ka ogaato 5000 ee Shaqaalaha ah ee ay Dowladdu ku celcelisay, Waxaana baaritaankeena aan ka billownay inaan dabagal ku samayno haddii ay jiraan Shaqaale cusub oo lagu soo biiriyay Hay’adaha Dowladda Somalia, Waxaanan ku ogaanay Baaritaankeena inaysan ka badnayn Shaqaalaha lagu soo kordhiyay Dowladda 200 oo Qof, kuwaasoo u badan Xoghayno Wasiiro, iyo Madaxda Sare ee Dalka. Waxaa sidoo kale jirta tirro aan ka badnayn oo lagu kala meeleeyay Safaaraddo, kuwaasoo aan ka badnayn 30 Qof.
HornAfrik waxay ogaatay in inkastoo aysan Shaqaalahan Dowladdu sheegtay ka dhex muuqan Hay’adaha Dowladda ay haddana yihiin Shaqaale jira oo ka xuquuq badan Shaqaalaha Saxda ah ee u diiwaan gashan Dowladda Somalia, Waxayna Dhalinyaradan oo tiradooda ay Dowladda ku sheegtay 5000 ay qaabilsan yihiin Faafinta Dacaayadda Dowladda ee Baraha Bulshadda, iyo Aflagaadaynta cid kasta oo ka fikir duwan Dowladda hadda jirta.
Xagee laga xukumaa Shaqaalahan, ?
Shaqaalahan ma yaqaanaan iyaga laftigoodu meel laga xukumo, mana jirto Xafiis ay u shaqa tagaan, Waxay amarka ka dhex qaataan Qol laga dhex sameeyay Whatsapp-ka oo uu Amaro ka siiyo Qof aysan aqoon, Waxaana lacagaha loogu soo diraa EVC kuwooda Wadanka jooga, halka kuwa Dibadaha jirana loogu diro Xawaaladaha Soomaalidda, iyadoo loo sheegay Magac Soo Dire oo ku qoran Lacagaha loo soo dirayo, Waxaana Somalia oo aan la waydiin Qofka Lacagta diraya Document qofka uu yahay uu sheegan karaa Soo Diruhu Magaca uu doono.
Maxay Qabtaan Shaqaalahan, ?
Shaqaalahan waxay qabtaan inay Baraha Bulshadda ku soo daabacaan Sheekooyin loo soo qoro oo isku eg oo lagu ammaanayo Dowladda Somalia, Waxaana marba lagu xusaa qof iyaga ka mida inuu qoray si ay inta kale uga dhigaan inay Qofkaasi ka soo xigtaan. Waxaana Sheekooyinkaasi ay u badan yihiin kuwo Qiyaali ah oo loo ekeysiiyay Dhacdooyin Run ah.
Dhalinyaradan waxaa sidoo kale lagu jiheeyaa Xildhibaanadda, Siyaasiyiinta iyo Wariyayaasha soo bandhiga wax ka duwan waxay rabto Dowladda Somalia, Waxayna ku furaan Buuq iyo Dacaayaddo, mararka qaarkood waxaa lagu jiheeyaa Qabiilo ay ku tilmaamaan Argagixiso, Dowlad Diid iyo Erayo kale. Waana tan ugu daran ee Dad badan ka caraysiisay in Qabiilo dhan loo caayo Qof ka mida oo Dowladda ka soo horjeeda.
Maxaa lagu xushaa Dhalinyaradan, ?
Dhalinyaradan waxaa lagu xushaa in ugu yaraan uu kiiba leeyahay 5,000 oo Saaxiibo Facebook ama Twitter ah, inuu leeyahay Website, inuu ku fiican yahay Live Video-ska, iyo qodobo kale.
Meeqaa la siiyaa, ?
Dhalinyaradan waxaa la siiyaa badankood lacago u dhaxeeya 300 illaa iyo 500 Dollar, Waxaase jira kuwa caan ah oo la siiyo 1,000 iyo Website-yo loo qoray bishii Lacago u dhaxeeya 2,000 illaa iyo 5,000, Iyadoona Website-yadan loo bixiyay Magacyo Afgarasho ah oo ay ka mid yihiin Xidigta Octoobar.
Qaarkood waxaa la dajiyay Hoteeladda Waawayn ee Muqdisho, waxaana laga bixiyaa Jiifka, iyo Cuntadda, Gaadiidna waa la siiyay, balse kuwan dambe ma qaataan Lacag toos ah ee Caloosha ayaa loo buuxiyaa, Hooyna waa la siiyay, mararka qaarkoodna Madaxda ayeey Sawiro la soo galaan, Waxaana la siiyaan markaas Xaqul Salaan.
Maxaa laga baran karaa, ?
Dhalinyaradan loo abaabulay ammaanta iyo Cayda waa dhaqan ku cusub Siyaasadda Soomaalida, Waxaana laga baran karaa dhowr arrimood ay ka mid tahay:-
1- In Dowladdu ay ka faaiidaystay Dhalinayaraddii Shaqo la’aanta ahaa, kuna jihaysay halka ay rabtay.
2- In la helay Cudud aan Ciidamin oo Sax iyo qalad Indho la’aan ku difaacaysa Dowladda.
3- In Xorriyaddii Hadalka iyo Dimuquraadiyaddii laga sii tuurayo Haadaan.
4- Inaan lala xisaabtami karin Dowladda Somalia.
5- In Siyaasadda Dowladdu aysan ku wajahnayn Argagixisadda ee ay ku wajahantahay Siyaasiyiinta Mucaaradka ah.
Isku Soo duuboo arrimahan oo dhan waa Cashar Cusub oo laga bartay Dowladda Somalia ee Halhayskeedu yahay Nabad iyo Nolol. Waana dhaqan ku soo biiray Siyaasadda Somalia oo caqabad ku noqon doona Maamulka kan xiga ee Somalia.
HornAfrik Media Network
Xog: UN Monitoring Group oo baaraysa Liiska Xildhibaanada Xisbiga Nabad iyo Nolol